ရသစာတန်း/ဆောင်းပါး | လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း
အရေးပါတဲ့ အရေးမပါတာတွေ – လင်းငယ်
.ပြည့်ပြည့်ဝဝ နားမလည်နိုင်တဲ့ ကဗျာတွေကို စူးစမ်း ခံစားကြည့်တဲ့အခါ တွင်းနက်နက်ထဲက တစ်စုံတစ်ရာကို သိချင်စိတ် ပြင်းပြစွာ ရှာဖွေစူးစမ်းရသလိုပဲ။သေဆုံးနေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သိချင်စိတ်တွေ ပြန်ရောက်လာသလိုပဲ။နာ ရီကို သတိထားမိတော့ တနင်္ဂနွေ ညနက်ပိုင်းကို ရောက် ...
ခင်ဇော်မိုး – လက်သုတ်ပဝါလေးတထည်
.ရွာ​ရေးရပ်​​ရေးကိစ္စ​များတွင်​ ဆင်းရဲချမ်းသာမ​ရွေး တန်းတူညီမျှ တာဝန်​​များ ​ဆောင်​ရွက်​ရ​လေ့ရှိသည်​။ အလှူအတန်းရှိသည့်​အခါတွင်​လည်း သူ့အုပ်​စုနှင့်သူ တာဝန်​ ပိုင်းခြား​ပေးထားသည်​။ အလှူပွှဲတခုတွင်​ ထမင်းချက်​ရမည့်​အဖွဲ့က ထမင်းချက်​တာဝန်​၊ ထ ...
မပိုင်ဆိုင်ခြင်းများ၏ အလွန်၌ – ​လေပြည်​ချမ်းချမ်း
.  အို … လှလိုက်​တာ။သိပ်​လှတာပဲ။အပြုံး​လေးက ငါးကန်​ထဲက ​ရေစိမ်းစိမ်း​လေးလို ကြည်​လို့ ။ ဒီ​လောက်​ အားမာန်​ပြည့်ပြီး ဖြူစင်​တဲ့ အပြုံး​လေးကို မမြင်​ဖူးဘူးကွယ်​။ ကြည်​လင်​လတ်​ဆတ်​သော အဖြူလွလွ ဂွမ်းစ​လေးလို နုညက်​လှိုက်​လှဲစွာ ဝင်းပ​သောအပြုံး ...
.သူ့ရဲ့ ​နောက်​ခံကားချပ်​ကို ကျွန်​​တော်​တို့ မသိကြဘူး။ သူဟာ ​တောင်​တန်း​တွေ ရှိရာ အရပ်​က ဆင်းသက်လာခဲ့တာလား။ ပင်​လယ်​ဘက်​က ဆန်​တက်​လာခဲ့တာလား။ ​မြေပြန့်​လွင်​ပြင်​ အရပ်​​ဒေသဘက်​ကလား။ ဘယ်​သူ တစ်​ဦးတစ်​​ယောက်​ကမှ ​သေ​သေချာချာ မသိကြဘူး။ သူ့ ...
အမေ့အိမ်ကို သူခိုးတက်ရင် အမေကြိုက်လား – အေးမိဖြူ
.ဒီ နေ့ ဆိုင်ကယ်ဆီထည့်ရင်း ဓာတ်ဆီထည့်ပေးတဲ့ ကလေးတဦးနဲ့ဆုံရတယ်။“ ဆရာမ ဆရာမ ဓာတ်ဆီလာထည့်တာလား၊ ဆရာမမျက်နှာ သိပ်မပြောင်းသွားဘူးနော် ” တဲ့။“ အေး ... အေး ... ” ဆိုပြီးသာ ပြောလိုက်တယ်၊ ဘယ်သူလဲပေါ့၊ ကျမက ဇဝေဇဝါနဲ့ ။ဒီလိုနဲ့ အဲဒီကလေးက ဆက်ပြောတယ်။“ သားကု ...
ဆောင်းဝင်းလတ် – အလွမ်းသင်္ကြန် ပန်းသင်္ကြန်
.ကျောင်းသားဘဝက ငယ်သူငယ်ချင်းများထဲတွင် “ ထွန်းကြည် ” ဆိုသူမှာ မိသားစုနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကလေး ရပ်ကွက် မန္တလေးလမ်းထဲတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထွန်းကြည်၏ မိခင်ကြီးက မြန်မာ့ အစားအစာတမျိုးဖြစ်သည့် “ အသုပ်စုံ ”ရောင်းရာ ဝင်ငွေလည်း ကောင်းခဲ့သည်။ ရှောက ...
.ပိ တောက်ကို ကျနော်ချစ်သည်။ ပိတောက်ပန်းကို ကျနော်ချစ်သည်။ ကျနော် ငယ်စဉ်ကတည်းက ပိတောက်ပန်းကို ချစ်သက် မြတ်နိုးခဲ့ရသည်ဆိုလျင် လွန်မည်မထင်ပါ။ကျနော် ငယ်ငယ်က မိသားစုနှင့် အတူနေထိုင်ခဲ့သော အိမ်ငယ်ကလေး၏ မလှမ်းမကမ်းတွင် ပိတောက်ပင်ကြီး တပင် ရှိပါသည်။ အမျ ...
အိမ့်ကြည်ဖြူ – ကြေးမီးပူလေး
.ကျွန်​မငယ်​စဉ်​ကအ​ကြောင်း​လေးကို အခု​နေခါ ပြန်​​တွေး​နေမိသည်​။ ပြန်​​တွေးခြင်းဖြင့်​ မတ်​တတ်​​ရပ်​​နေရ​သော ဒုက္ခကို ​မေ့​နေ​စေနိုင်​သည်​။ အလုပ်​ကိုလည်း ပြီးလို့ပြီးမှန်း သတိမထားမိ​အောင်​ မြန်​ဆန်​​စေမည်​ဟုထင်​သည်​။ ​နေလှန်းထားရာမှ ရုတ်​ခဲ့​ ...
ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်း မြန်မာကဗျာနာကျင်မှု(စာတမ်း) – ငြိမ်းဝေ(ကဗျာ့အိုးဝေ)
ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်း မြန်မာကဗျာနာကျင်မှု (စာတမ်း) စာတမ်း ပြုစုရေးသား တင်သွင်းသူ။ငြိမ်းဝေ(ကဗျာ့အိုးဝေ)စာတမ်း တင်သွင်းသည့် အခမ်းအနား။Art Workshopစာတမ်း တင်သွင်းသည့်နေရာ။ပြင်ဦးလွင် ထန်းရိပ်ညို အနုပညာရိပ်သာနိဒါန်း“ ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်း မြန်မာကဗျာနာကျင်မှု စ ...
.အရူးဟုဆိုလျှင် အဝတ်အစားစုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နှင့် လမ်းတကာလျှောက်သွားကာ ဟိုဟာ ကောက်စား သည်ဟာ ကောက်စား နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် မိုးရွာလျှင်စို နေပူလျှင်ခြောက် နေထိုင်ရာအတည်တကျမရှိ စောင့်လျှောက်သူမရှိ ဗိုက်ဆာမှန်း မဆာမှန်းမသိ တစ်ယောက်တည်း စကားတွေပြေ ...
. (၁) တို င်းသူပြည်​သားများကို ကိုယ်​ချင်းစာတတ်​​သော ထိုင်းဘုရင်​ကြီးသည်​ အလွန်​တရာ ပူပြင်းလှ​သော ​နွေရက်​များ၌ မိုးအတုရွာချ​စေပြီး ​အေးချမ်း​စေခဲ့သည်​ဟု ကြားသိခဲ့ရဖူးပါသည်​။ မိုးအတုသည်​ လိုအပ်​​နေ​သောအချိန်​၌ အ​ထောက်​အပံ့​ကောင်းတစ ...
ခင်မင်းဇော် – နှုတ်ဆက်ချင်သည်
.(၁)ခင်​ ဒီည ပန်းချီမဆွဲဖြစ်​။ရိပ်​ကနဲ အမူးမှာ လူကလည်း ဖျတ်​ကနဲ လဲကျမတတ်​။ ခု​တော့ အိပ်​ရာ​ပေါ်မှာလှဲရင်း ​ရောက်​တတ်​ရာရာ​တွေးမိသည်​။ခု ​နေများ​သေခဲ့ရင်​ အရွယ်​​ကောင်း​ သို့မဟုတ်​ ​နေမယ်​ဆို​ နေနိုင်​​သေးတဲ့အရွယ်​လို့ နှ​မြောတသ​ပြောကြမည်​။ ​သေ ...
အဆိပ် – လေပြည်ချမ်းချမ်း
.[ ကမ္ဘာပေါ်က ကိုယ့်အနီးဝန်းကျင်ကလူတယောက်ရဲ့နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ တွေးတတ်လာတဲ့အခါကျွန်မဟာ … ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်မြတ်နိုးတတ်လာလိမ့်မယ် ။ ]ဆရာ မင်းခိုက်စိုးစန်က ရေးတယ် ။ကလေးတစ်ယောက်ဟာ Bus ကားပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကို တက်နင်းမိ ...
လက်များ – ကျော်ကျော်(မြရည်စမ်း)
ကျွ န်​​တော်​အခု​နေတဲ့ မြို့​လေးနားမှာ အလျား တစ်​ဆယ့်​နှစ်​မိုင်​၊ အနံ ​ခြောက်​မိုင်​​လောက်​ရှိတဲ့ အင်းကြီးတ​ခုရှိပါတယ်​။ ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ တတိယအကြီးဆုံးလို့ ​ပြောကြတယ်​။ အဲဒီ အင်းကြီးထဲမှာ ဘုရားတ​ဆူရှိတယ်။ဘုရားပွဲကို တ​ပေါင်းလမှာ ပြုလုပ်​ကြ ...
.ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၅၂ )တ နှစ်တကြိမ် ရောက်လာနေကြနွေဦးကို ရောက်လာပြန်ခဲ့ပြီပေါ့။ အဝေးတနေရာက ဥသြငှက်ကလေးရဲ့လွမ်းဆွတ်ဖွယ်တွန်ကျူးသံကို ကြားလိုက်မိတယ်။ စိန်ပန်းနီနီတွေလည်း ပွင့်ကြတော့မယ်။ ပေါက်ပန်းတွေလည်း ပွင့်နေလောက်ပြီပေါ့။ ဒီနွေဦး ...
တောင်ခြေရွာ – စိုးခိုင်ညိန်း
.ကျွန် တော်တို့အဖွဲ့ စီးလာသောကားသည် အကွေ့အကောက်များသော လမ်းအတိုင်း တတောင်ဆင်းလိုက် တတောင်တက်လိုက်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ တောင်တန်းတွေဆီကို ဦးတည်သွားနေသည်။ ကားမူးလေ့မူးထ မရှိလှသော ကျွန်တော်သည်ပင် အကွေ့အကောက်တွေနဲ့ ကားမူးကာ မကြာခဏ အန်နေရသည်။ တနေရာ အရေ ...
ကိုနိုင်း – အတုအစစ်များကိုခံစားကြည့်ခြင်း
. ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၅၀ ) ခေတ်ကြီးဟာအတုအစစ်များနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အတုအစစ်တွေရှုပ်ထွေးနေတာပိုများတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ အစစ်တွေထက်အတုတွေပိုများနေပါတယ်။ အစစ်ဟန်ဆောင်ထားကြတဲ့အတုတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ စ ...
ကယန်းဒေသ “ ခေါင်အကြောင်း တစေ့တစောင်း” – ပွင့်သစ်(ကရိန်ကန်)
Posted by: ပွင့်သစ် (ကရိန်ကန်)
.ကယန်းလူမျိုးတွေ စွဲစွဲမြဲမြဲသောက်တဲ့ ခေါင်ရည်က သုံးမျိုးရှိတယ်။ စုပ်ခေါင်၊ခေါင်ကျရည်နဲ့ဖောက်ခေါင် လို့ခေါ်တဲ့ ခေါင်ရည် သုံးမျိုးပါ။.ညီမလေး ဆိုးဝတ်ထ်က လူမျိုးစုတွေအကြောင်းကိုရေးထားတာကို ဖတ်မိတော့မှ ကျနော်လည်း ရေးချင်စိတ် ပေါက်လာလို့ ကိုယ်ရောက်ခ ...
စစ်​ပွဲ​တွေက​တော့ သူမ​မွေး​သေးခင်​အချိန်၊ သူ့အ​ဖေတို့က​လေးဘဝထဲက စခဲ့တယ်​လို့ ကြားဖူးပါတယ်​။ အခုဆို သူ့အသက်​ပဲ ​လေးဆယ်​​ကျော်​ခဲ့ပြီ၊ သူ့အ​ဖေဆုံးသွားတာလည်း ကြာခဲ့ပါပြီ။ အ​ဖေက သူငယ်​ငယ်​တုန်းကပြောဖူးတယ်​။ စိတ်​ပူတာ နှစ်​ခုပဲရှိတယ်​တဲ့။ သူ နံပါတ် ...
Posted by: နိုင်ဝင်းသီ
. ထို ညက မြို့ကလေး၏ ကောင်းကင်ပေါ်တွင် မိုးသားတိမ်တိုက်များဖြင့် စုဖွဲ့အုံခဲနေခဲ့သော်လည်း လရောင်ကိုတော့ မြင်နေရပါသည်။ ညဦးပိုင်းတုန်းက မိုးစက်ဖွဲဖွဲမှုန်မှုန်လေးတွေ ရွာထားလို့နှင့်တူသည်။ နှင်းဆွတ်မိုးစက်မ ...
ကျော်ထင် – ကျနော် ပျောက်နေတဲ့ တပေါင်း
. (တစ်) ကျနော်စာသင်တဲ့ ကျောင်းတွေထဲက ဟိန်းရတနာအောင်ကျောင်းဝန်းထဲမှာ စိုက်ထားတဲ့ သစ်ပင်လေးတွေကို ကျနော် သိပ်သဘောကျတယ်။ သကြားသီးပင်တဲ့။ အကိုင်းအလက်တွေက သေးသေးသွယ်သွယ်နဲ့  အများ ကြီး ဖြာနေတာ။ အဲ့ဒီ့ အကိုင်းအလက်တွေ ဖြာနေပုံက ဖွင့်ဆောင်းထားတဲ့ ထီးခရ ...
.ပန်းလေးတပွင့်ကို xxx မခူးရက်လို့ ငေးမောမိသူ xxxကျနော့်အဖြစ်ဟာ xxx တကယ်နောက်ဆုံးတော့ ကြေကွဲစရာ xxxဝေးဝေးသို့သာ xxx အသည်းနင့်နင့် ကျောခိုင်းထွက်ခွာ xxxဘ၀တလျှောက်မှာ xxx ဘယ်လိုနည်းမှ မဖြေသိမ့်သာ xxxရောက်လေရာ xxx အမြဲ မျက်ရည်ဝဲဖို့ အကြောင်းဖန်လာ xx ...
မောင်စိုးသစ် –စိတ်အလျဉ်၏လွင့်မျောရာနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ(၃)
Posted by: မောင်စိုးသစ် (အယ်ဒီတာ)
.စိ တ်ရဲ့အလျဉ်ကတော့ အံ့မခန်းမြန်ဆန်ပါပေတယ်။ ဖျတ်ကနဲတွေ့လိုက်ရတဲ့ ရုပ် ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ဖြစ်စဉ်တခုနဲ့အတူ စိတ်ခံစားမှု အတွေးတစ အာရုံရိပ်တခုက ချက်ချင်းလို ရောက်လာတော့တာပဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြန်ဆုံးဆိုတဲ့ အလင်းအလျဉ်ခမျာတောင် အမီမလိုက်နိုင်ရှာပေဘူး။ သူ့ရဲ့စ ...
.မိုး ​သောက်​ဆို​ပေမဲ့ ​နေ​ရဲ့အလင်း​ရောင်​မလာ​သေးတဲ့ အချိန်​။ လမ်းမီး​တွေက လင်းတဲ့​နေရာမှာလင်း။ ​မှောင်​တဲ့​နေရာ​မှာမှောင်​။ ကမ္ဘာ့မျက်​နှာပြင်​က အစက်​​အ​ပျောက်​​တွေလိုလိုနဲ့။ လူသံတချို့က တိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့။ပလက်​​ဖောင်း​ဘေးတ​​နေရာ​လေးက ထွက ...
ခင်မင်းဇော် – သစ်ခွပင်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ
.သစ်ခွပန်းတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တာ ကျနော်ဝါသနာအပါဆုံး အလုပ်တခုပေါ့။ရာသီအလိုက်လှလှပပ ပွင့်နိုင်ဖို့အတွက် နေရောင်ရရှိရေးကနေ သူတို့အတွက် အားဆေးတွေ သုံးတတ်ဖို့ အထိ ကျနော် လေ့လာမဆုံးတော့။ အသက် ၁၈ ဝန်းကျင် ကျနော့်အတွက် သစ်ခွပန်းပင်တွေက တကမ္ဘာဖြစ်နေခဲ့ပ ...
ဒီလူည – ခရေ ဖီလင်
.ကျနော် နေထိုင်ရာလမ်းဟာ ခရေလမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလမ်းမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ငယ်ဘဝ ခြေလှမ်းတွေဟာ ပျော်ရွှင်စရာများ၊ ကြေကွဲစရာများနဲ့ ရောယှက်နေပါတယ်။ည ည ကင်းစောင့်ရတဲ့ ညတွေမှာ ကြက်ကာလသားချက် ချက်စားခဲ့ကြတာတွေ၊ အုတ်ခုံလေးမှာထိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညဥ့ ...
စည်သူသိင်္ဃ – သောကြာနံတကောင်၏ သင်ပုန်းကြီးဖြတ်စများ
.ဘု ရားကျောင်းထဲက စန္ဒယားခုံကြီးကိုမြင်တော့ ငယ်စဉ်ကတပ်မက်လိုချင်ခဲ့ဘူးသော အော်ဂင်ကလေးကိုသွားသတိရသည်။ မူလတန်းကျောင်းသားဘဝလောက်က ဒီအော်ဂင်ကိုမှ စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ဘာရယ်မဟုတ် ခလုတ်ကလေးကိုထိခတ်လိုက်ရုံနှင့် အသံထွက်နေသော အဖြူအမည်းတန်းကလေးတွေ ...
.ခေတ်ဆိုးကြီးတခေတ်ကို ဖြတ်သန်းလိုက်ရတဲ့အခါ အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဓားစာခံခေါ်ခေါ်၊ သားကောင်ခေါ်ခေါ် အဲဒီလိုလူတွေ အများကြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုလူတွေကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက ကုစားမှုပေးရမယ်။ ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမယ်။ဒါကို မလုပ်ဘဲနဲ့ေ...
မောင်စိုးသစ် –စိတ်အလျဉ်၏လွင့်မျောရာနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ (၂)
.ဘဝဟာ ခေါက်ရှာငှက်များ ပျံသလိုပဲ နိမ့်တုံမြင့်တုံ ဖြစ်လေရဲ့ ဆိုတဲ့စကားကို ငယ်ငယ်က ဖတ်မှတ်ခဲ့ဖူးတာကိုမကြာမကြာပြန်သတိရ မိတတ်တယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားသွားလာ၊ အားကစားလုပ်၊ကျောင်းတက်၊ကျောင်းပြေး လုပ်ချင်ရာကို အပိတ်အပင်အဟန့်အတားမရှိ လုပ်ခွင့်ရခဲ့တ ...
ခင်မင်းဇော် – ချစ်ခြင်းဖွဲ့သီ
.ဒီ နေ့ ကော်ဖီဆိုင်က မထင်မှတ်ပဲ လူများနေတာ တွေ့ရတယ်။ ခါတိုင်းထိုင်နေကျ ညာထောင့် စားပွဲမှာလဲ လူရှိနေတယ်။ ဆိုင်ထဲ ဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်တော့ တယောက်တည်းထိုင်နေတဲ့ စားပွဲ တခုပဲရှိနေပြီး အဲဒီစားပွဲကလဲ လေးယောက်ထိုင်ခုံနဲ့ စားပွဲဖြစ်နေတာ တွေ့တာနဲ့ ခွင့်တောင်း ...
Posted by: ကိုဈာန်
.“ထမင်းဖိုးလေး ပေးပါ”သောက်လက်စ လဘက်ရည်တငုံက လည်ချောင်းဝတွင် တစ်ဆို့သွားသည်။ နံဘေးတွင် နှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးလေးကို ခါးထစ်ခွင်တင်၍ အ၀တ်နှင့် လွယ်ထားသည့် ခလေးမလေး တယောက်။ မဲဆောက်ဈေးတန်းထဲက လဘက်ရည်ဆိုင်တန်းတွေမှာ လိုက်လံတောင်းရမ်းနေတာပါ။ နီကြောင်ကြောင ...
ကျော်ကျော်(မြရည်စမ်း) –မြောက်ဘက်မှာ တွေးဆမိခြင်း
Posted by: ကျော်ကျော်(မြရည်စမ်း)
.လမ်းနံဘေး ဝဲယာ ဂရုစိုက်ရသေးသည်။ ရှေ့ မှသွားနေသူတို့ကို အမီလိုက်ရင်း နားစွင့် ၊ မျက်စိဖွင့် ထားရသေးသည်။ ငိုက်ချင်သည်။ မငိုက်ရဲ။ ချမ်းသည် ။ စီးကရက်ကို မီးမညှိနိုင်။ ကိုယ်ပေါ်အထပ်ထပ်ဝတ်ဆင်ထားသော စွပ်ကျယ်၊တီရှပ်၊ဆွယ်တာနှင့်ဂျာကင်အထူကြီးက မွ ...
.အဲဒီတုန်းက ကျွန်​​တော်​တို့ဟာ ​လေတိုက်​ရာအရပ်​ကို ဆန့်​ကျင်​ပျံသန်း​ခဲ့ကြတဲ့ မိုးတိမ်​​တွေ။​ ​ရှေ့မှာ ဘယ်လိုအဆီးအတားမျိုးပဲ ကာဆီးနေပါစေ၊ အဆီးအတား မှန်​သမျှကို အား​ကောင်းသန်​မာစွာနဲ့ တဝုန်းဝုန်း ဖြတ်​တိုက်​သွားရဲတဲ့ မုန်​တိုင်း​တွေ​ပေါ့။ကွ ...
နှင်းခါးမိုး – လှပသော သုည
.နှစ်သစ်တခုသို့ ရောက်ပြီ။ တနှစ်ကုန်ဆုံးသွားပြန်ချေပြီ။နှစ်ဟောင်းကို နှုတ်ဆက်ခွဲခွာရင်း တပြိုင်တည်းမှာ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။နှစ်ဟောင်းနှင့်အတူ ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ ကြေကွဲမှုတွေ၊ နာကျင်မှုတွေ၊ ဒုက္ခတွေ ပါသွားစေချင်သည်။ နှစ်သစ်နှင့်အတူ မျှော်လင့်ချ ...
ကေဇော်မိုး – ကျနော့်အဘွား
Posted by: ကေဇော်မိုး
.ကျ နော့်အဘွားက သူ့နာမည်သူ ရေးတတ်ရုံသာရှိပါတယ်။ ကျနော့်အဘွားက ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ထံမှာ သူ့နာမည်ကိုစာလုံးပေါင်းတတ် ရေးတတ်ရုံအထိသာစာသင်ဖူးပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်တုန်းက ကျေးလက်နေ ဗမာတွေရဲ့အသိစိတ်မှာ မိန်းကလေးဆိုတာ သေစာရှင်စာ ဖတ်တတ်ရုံအထိသာ စာသင်သင့်တယ် ...
ခင်မင်းဇော် – ပိုးထိုးသစ်သီးတလုံးရဲ့ရာဇဝင်(၄)
in: ဒီလဖတ်စရာ, ရသကဏ္ဍ, ရသစာတန်း/ဆောင်းပါး, ဝတ္ထုတို/ဝတ္ထုရှည်
. အပိုင်း (၄) ကို ယ် ဒီဝန်းကျင်ကနေ ဘယ်လိုထွက်ပြေးရမှာလဲ။ သမီးရဲ့ တနှစ်စာ ကျောင်းစရိတ်ဟာ ကိုယ့်အင်အားနဲ့ ရုန်းကန်ရတဲ့အနေအထားမို့ ကျောင်းအပ်ခတွေပေးပြီးချိန်မှာ စဉ်းစားစရာ အချက်တခု ဖြစ်နေပြန်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ခုလို ကလေးတယောက်အမေဘဝမှာ ဘာလို့ သူ့ကို ...
ခင်မင်းဇော် – ပိုးထိုးသစ်သီးတလုံးရဲ့ ရာဇဝင်(၃)
.အပိုင်း (၃)သမီးလေးကို ကျောင်းအပ်ဖို့ နာမည်ကြီးကျောင်းတခုကို ကိုယ်ရွေးချယ်ထားခဲ့တယ်။ ကိုယ်နေတဲ့နေရာနဲ့ သိပ်လဲ မဝေးလို့ ကျောင်းကြို ကျောင်းပို့ ကိစ္စ တကူးတက မလိုတဲ့အတွက် သဘောကျမိတာလဲ ပါတာပေ့ါ။ကိုယ်ကျောင်းသွားအပ်ခဲ့တဲ့နေ့က ကျောင်းဝင်းရဲ့ အပြင်အဆင်ေ ...
သစ်ကောင်းအိမ် – တံတားကြီးတန်း
လူတွေပျော်ရွှင်သွားလာနေသော အိမ်ရှေ့က လမ်းမကြီးကို ငေးမောကြည့်နေသူ ကျနော့်အား အမေဒေါ်သန်းစိန်က ထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတခွန်းပြောလာပါသည်။ သူတို့ ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ကို သွားရင် နင်ဟာ သစ္စာဖောက်ပဲ… ဆိုသည့် စကားတခွန်း (၁) ထို ကာလက ထုတ်ဝေသည့် ဒီရေစီးသံမဂ္ဂဇင်းထဲ ...
မြနှောင်းညို – အရွယ်မတိုင်ခင် ရှုံးနိမ့်ခြင်း
.ဘဝမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် ရှုံးရတဲ့ လူတယောက်အကြောင်းကို အများသူငါ မှတ်ယူ သတိထား သင်ခန်းစာယူသင့်၊ ဆင်ခြင်သင့်ကြတယ်လို့ အေးဆင့်က ယူဆနေမိတယ်။ ကြားသိနားလည်ထားရင်၊ ဖတ်ရှုဖူးထားရင် ခံစားတွေးဆပြီး မသိသေးသူတွေကို အသိပညာဝေမျှပေးနိုင်မှာလေ။ အေးဆင့် လောလောလတ်လတ် ...
မောင်စိုးသစ် –စိတ်အလျဉ်၏လွင့်မျောရာနှင့် လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ(၁)
.သူ အိပ်မယ်လို့ကွန်ပြူတာရှေ့ကထတော့ ခပ်ဝေးဝေးကရော အိမ်နားဝန်းကျင်ကပါ ကြက်တွန်သံတွေ ဆက်တိုက်လိုလိုကြားနေရပြီ။ လင်းကြက်လို့မြန်မာတွေခေါ်တဲ့ ကြက်တွန်သံတွေပဲဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ လင်းကြက်တွန်လို့ပဲမိုးလင်းသလား မိုးလင်းတော့မှာမို့ပဲ လင်းကြက်တွန်တာလား စဉ်းစား ...
အိမ် – ခင်ဇော်မိုး
(၁) ဒီ နှစ်ထဲ ကျန်းမာရေးည­ံ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါပ­ဲ။ ခဏ ခဏ အစာအိမ်က ဒု­က္ခပေးသည်။ ဟိုအရင် နှ­စ်နှစ်ကျော်လောက်က ပေ­ခဲ့တေခဲ့သမျှ အခုတော့ လှလှပပခံရတော့သည်။ တနှစ်ပြည့်တော့ ဗိုက­်အောင့်နေခြင်းက ဆေးစ­ားရုံ၊ ဆေးထိုးရုံနှင­့် မလုံလောက်တော့ပေ။ နောက်ဆုံး ဆေးရ ...
သစ်ကောင်းအိမ် – ဂျုံခင်းထဲမှာလိုက်ဖမ်းသူ ရဲဘော်လီယွန်ဗက်သို့
(၁) မနေ့ကမနက် အိပ်နိုးတဝက်ဖြစ်ကာ ဧဒင်နှင့်ဖက်အိပ်နေသော ကျနော်တို့သားအဖအိပ်ရာနှင့် မလှမ်းမကမ်းစားပွဲတွင် မိုးလင်းပေါက် အလုပ်ထိုင်လုပ်နေသည့် ကေခိုင့်ထံသို့မက်ဆင်ဂျာမှဖုန်းမြည်သံနှင့်အတူ အန်တီမီးငယ်၏နှုတ်ဆက်သံထွက်လာပါသည်။ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက် နောက ...
မြဇင်ယော် – ပန်းချစ်သူ
လွ န်​ခဲ့တဲ့အနှစ်​ ၂ဝ ​ကျော်​​လောက်​က အသက်​ ၅ နှစ်​ဝန်းကျင်​အရွယ်​ က​လေးမ​လေးတ​​ယောက်​ ရွာရိုးကိုး​ပေါက်​ ​မျောက်​မူး​အောင်​ လည်​ရင်းပတ်​ရင်း ​ဆော့ရင်းကစားရင်း တ​နေရာအ​ရောက်​၊ အစိမ်း​ရင့်ရင့်သစ်​ရွက်​​တွေအကြားမှာ ​ဖွေး​ဖွေးလှုပ်​​အောင်​ပွင် ...
ခင်မြဇင် – ငှက်ကလေး
5-1-2018 နေ့က ငှက်ကလေးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ငှက်ဖမ်းသမားကနေတဆင့် ငှက်ရောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ လှောင်အိမ်ထဲမှာပါသေခြာပြောပြရရင် မကွေးမြသလွန်ဘုရားစောင်းတန်းမှာ ယတြာချေ ငှက်လွှတ်လိုသူတွေအတွက် ဖမ်းဆီးရောင်းချခံရတဲ့ ငှက်ကလေးတွေထဲက ငှက်လေးတကောင်ပေါ့ဇင်ယော ...
နိုင်ဝင်းသီ –ဂင်္ဂါမြစ်​ဘေးက ငါးတကောင်​(သို့မဟုတ်)မောင်ကျော်သာ (ပဲခူး)
ကန်​သုံးဆင့်​ဟာ ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ဘဝထဲက အရိပ်​​စိမ်းလေးတ​ရိပ်​။ တချို့က​တော့ ဒီ​နေရာ​လေးကို ကန်​ညီ​နောင်​လို့ အမှတ်​သညာပြု ထားကြတယ်​။ ကြည်​လင်​​နေတဲ့ ​ရေကန်​ကြီး သုံးကန်​နဲ့ ငြိမ်​ဆိတ်​​နေတဲ့ ဝန်းကျင်​နဲ့ သန်​လျင်​​တောရရဲ့ ဣ​နြေ္ဒသိက္ခာကြီးမားမှုနဲ ...
ခင်မင်းဇော် –ပိုးထိုးသစ်သီးတလုံးရဲ့ ရာဇဝင် (၂)
. အပိုင်း(၂) သမီးလေး အသက် ၁ဝ နှစ် ပြည့်တော့မယ်။ နယ်စပ်ကနေ ပြည်တွင်းကို ပြန်ဝင်ရဖို့ အကြောင်းတွေ ဖန်လာတယ်။ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ကိုယ်ကျင်လည်နေခဲ့တာလဲ ၁၁ နှစ်နီးပါး ဖြစ်နေပြီ။ ကိုယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ NGO အဖွဲ့က ပြည်တွင်းဘက်ကို ပြောင်းပြီး အခြေချ လုပ်ကိုင်ေ ...
စိုးခိုင်ညိန်း – ကူးခတ်ခြင်း
အခုလို သွေးအလိမ်းလိမ်း ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် ဗရပွနဲ့ မနားတမ်း ကူးခတ်နေရတာကလည်း အမှန် စင်စစ်တော့ ငရဲပဲ မဟုတ်လား။အခုရက်ပိုင်းတွေမှာ ကျွန်တော်ဟာ တနေ့နဲ့ တနေ့ မောကြီးပမ်းကြီး ကူးခတ်နေရင်း တယောက်တည်းနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ရက်တွေပါပဲ။ တိုက်ပွဲက နေ ...
သန်းဝင်းထွဋ် – ၂ဝ၁၇ အမည်ရ သင်္ဘောတစင်းရဲ့ လွမ်းစရာသိပ်မကောင်းလှတဲ့ ဈာပန
၂ဝ၁၇ ဟာ အမောတကော တက်သုတ်ရိုက် မုန်တိုင်းလွတ်အောင် မောင်းနေတဲ့ သင်္ဘောတစင်းပါပဲ။ အသက်​လု​ပြေး​နေရသလို အသားကုန်အမြန်နှုန်းနဲ့ မောင်းနေခဲ့တယ်။ 2017 အမည်ရတဲ့ ဒီသင်္ဘောရဲ့ အတွင်းသိလို့ ဆိုနေကြတဲ့ လက်တဆုပ်စာလူတွေကြားမှာပြောဆိုနေကြတာရှိတယ်။ သင်္ဘောကြမ်းပြ ...
ေကြးစားမိန်းမတယောက်ဆီကနေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မျှော်လင့်လို့ မရနိုင်ဘူး။ သူခိုးဓားပြတွေအကြား တရားမျှတမှုကို မျှော်လင့်လို့မရနိုင်ဘူး။မျှော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့ အရပ်မှာ မျှော်လင့်ခြင်းကို မျှော်လင့်လို့ မရနိုင်ဘူး။အရေးမကြီးတာကို အရေးကြီးတယ်ထင်ပြီး အရေးတ ...
ကျော်ကျော်(မြရည်စမ်း) – မျှော်ရီငေးရင်းတွေးမိသည့် အဖြူနှင့်အမည်း ဓာတ်ပုံဟောင်းများ
ကျွ န်တော့် ဇာတိမြို့လေးသို့ မနေ့ကပြန် ရောက်သည် ။ ဝေးကွာသွားသည့် ဆယ်စုနှစ် တခုအလွန်မှာ မြို့လေးက လမ်းတွေကျယ်လာပြီး ကျွန်တော် သွားစရာ နေရာကျဉ်းသွားသည်။ လွန်ခဲ့သော ကာလများကလို ဘီယာဆိုင် ၊အရက်ဆိုင်ထဲ မပျော်ချင်သောစိတ်ကိုလည်းအံ့သြနေမိသည်။ မူးရီဝေဝါ ...
ကိုဈာန် – အရုပ်ကလေးရဲ့ မေမေ
ညနေမှောင်ရီပျိုးချိန် ပုဇွန်ဆီရောင်သန်းနေတဲ့ နေလုံးကြီးက လယ်ကွင်းပြင်စိမ်းစိမ်းတွေထဲကို တိုးဝင် ပျောက်ကွယ်တော့ မည်။ ညနေတိုင်း ညနေတိုင်းမှာ လယ်တဲထဲကနေပြီး နေဝင်တာကို ထိုင်ထိုင်ပြီး ငေးရတာ လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလိုပင်။ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်မွေးရပ်ကို တမ ...
စစ်ကြိုခေတ် ပြဇာတ်မင်းသားဂိုက် ဖမ်းထားသော အဲဟိုလူကြီးကိုလည်း မနှစ်သက်။ ပွဲရှိရာအရပ်ကို တရှုံ့ရှုံ့နှင့်အနံ့ခံနေကြသော ပွဲတိုင်းကျော် ကြွက်တွေကိုလည်း မနှစ်သက်။ ပီကာဆို၏ ချိုးငှက်ကို အမွေးအတောင်တွေ ကျွတ်ထွက်ကုန်အောင် ဝိုင်းဆိတ်ကြသော လင်းတတွေကိုလည်း ...
Posted by: လင်းငယ်
(၁)ငယ်ငယ်က သားငယ်လို့ ကိုယ့်ကို အဖေကခေါ်လေ့ရှိတယ်။ စိတ်လက်ကြည်သာချိန်၊ သာမာန်အချိန်တိုင်းမှာ ဒီစကားလုံးပဲ သုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခုခုအလိုမကျတဲ့အခါ ကိုယ်က အမှားအယွင်းတွေကျူးလွန်မိတဲ့အခါ ဟိုကောင်တို့ ဒင်းတို့ဆိုတဲ့ ခပ်စိမ်းစိမ်း စကားလုံးတွေ သုံးပါတယ်။ ...
(အက်ဆေး) တစုံတယောက်က သင့်ဆီ မနက်ခင်းလေးတခု ပို့လိုက်မည် ဆိုပါစို့။ ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလိုက်မလဲ။သိ မ်းထားမည်။ အဲဒီမနက်ခင်းလေးကို တမြတ်တနိုးသိမ်းဆည်းထားမည်။ ရှင်းသန့်တဲ့မနက်ခင်းလေး။ လန်းဆန်းတဲ့မနက်ခင်းလေ။ အေးမြတဲ့မနက်ခင်းလေး။ မျှော်လင့်ချက်တွေန ...
ဆိုင်းဘုတ်တွေ သစ်လွင်နေပေမယ့် အတွေးတွေအိုဟောင်းသွားပြီ။ ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ အများကို စည်းရုံးထားလို့ ရမယ်ထင်နေသေးတာပဲ။ မိုးကလင်းပြီ။ လမ်းမီးတွေက မမှိတ်သေးဘူး။ အတွေးတွေ လင်းပါစေတော့ရယ်လို့ ထွန်းများထားတာလား။ အလင်းရောင်ဟာ မှောင်နေတဲ့ဘက်မှာ ပို၍ အသု ...
သူလာတယ် – ခင်မင်းဇော်
ကလင် ဆိုတဲ့ အိမ်တံခါး ဘဲလ်သံသဲ့သဲ့နောက်က မှန်ဘီလူးကြည့်ပေါက်ကလေးကို အကြည့်မှာ ကိုယ့်နှလုံးသားတွေ ဆတ်ဆတ်တုန်သွားတယ်။ မျက်နှာငုံ့ပြီး လက်ပိုက်ရပ်နေတဲ့ သူ့ကို ကိုယ်တွေ့လိုက်ရတယ်လေ။ သူလာပြီ။တံခါးဖွင့်ဖို့ သော့ကို ထားနေရာကျနေရာမှာ မတွေ့လို့ ဘယ်မှာထား ...
အိမ်အပြန် – နရီမင်း
ဗလာစာရွက်တွေ စုချုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်ကြီးလို ခန္ဓာကိုယ်အလွတ်ကြီးကိုပဲ အမေမွေးခဲ့တာပါ။ ဒီစာအုပ်ကြီးထဲကို စာသားတချို့ ရိုက်နှိပ်လိုက်ပြီ ဆိုပါတော့။ တချို့စာအုပ်တွေဟာ မူလကဗလာအတိုင်းရှိခဲ့တဲ့ စာအုပ်ထက် တန်ဖိုးတက်သွားကြလေရဲ့။ တချို့ဆို တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ေ...
ရှေးခေတ်မုန့်ဆိုင် – လူပန့်ငယ်
Posted by: လူပန့်ငယ်
ကျွန် မ ၁ဝ နှစ် သမီးတုန်းက နေ့စဉ် သွား နေကျ မုန့် ဆိုင် တစ် ဆိုင် ရှိပါသည်။ကျွန် မတို့က လေးများက ထိုဆိုင် ကို ရှေး ခေတ် မုန့် ဆိုင် ဟု နာမည် ပေးထားကြပါသည် ..။ ရှည် လျားသောဟင်းရွက် စိုက် ခင်းများ ပေါ်က မည်းနက် သော ဓာတ် တိုင် မြင့် မြင့် ကြီးမျ ...
စ်ိမ်းမြမြမီးလျှံ – နိုင်ဝင်းသီ
“ တရားမှတ် တယ် ဆိုတာ အရှိကို အရှိအတိုင်းမြင် တွေ့သွား အောင် ရှုမှတ် ရတာမျိုးပါ။ မရှိတဲ့အရာကို အရှိလုပ် ပြီး ရှုမှတ်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သံသရာတစ် လျှောက် လုံးတောက် လောင် လာခဲ့တဲ့ မီး တောက် တွေကိုငြှိမ်းသတ် ချင် တယ် ဆိုရင် အဲဒီမီး တောက် တွေ ခေါင် ...
သူကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့ ဆံပင်ရှည်ပျော့ပျော့တွေက ပုခုံးသားပေါ်မှာ ဝဲလို့အဝါရောင်တွေနဲ့ ချစ် အသားက လိုက်ဖက်တယ်လို့ ပြောဖူးတာလဲ သတိရမိသေးတယ်မြက်ခင်းစပ်မှာ သူ့ကားလေး ထိုးရပ်လာတာကို မြင်နေရတယ်။ ကားတံခါးဖွင့် ဆင်းလာပြီး ပုဆိုးပြင်ဝတ်လိုက်သေးတယ်။ ပြီး တံ ...
Posted by: ညိုထက်ညို
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘားအံ သို့ ဆက်ထွက်ခဲ့သည်။ဖြတ်လာသော လမ်းတလျှောက်မှာ မိုးတွေက အုံ့နေသည ...
(၁)ဝေလီဝေလင်း နှင်းမှုန်တို့ ဝေဝါးချိန်။ အမျိုးသမီးတဦး၊ ကလေးငယ်တယောက်နှင့်၊ မြဝတီကနေ မဲဆောက် သွားတဲ့ လမ်းမကြီးအတိုင်း ကုန်စိမ်းဗန်းခေါင်းရွက်ပြီး ခလေးငယ်အား လက်ကဆွဲ၍ မဲဆောက်ဈေးကို အသော့ နှင်နေသည်။ အေးစိမ့်မှုဒဏ်က လမ်းမြန်မြန်လျှောက်တာမှ သူမအတွက် ...
in: ကဗျာ, ကာတွန်း, ဒီလဖတ်စရာ, ရသကဏ္ဍ, ရသစာတန်း/ဆောင်းပါး, ဝတ္ထုတို/ဝတ္ထုရှည်, ဟာသ/သရော်စာ
ရသစာပေကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍စာမူများတောင်းခံခြင်း လွတ်လပ်လှိုင်းရဲ့  “ရသစာပေ” ကဏ္ဍမှာ –(၁) ကဗျာ(၂) ကာတွန်း(၃) ဝတ္ထုတို/ဝတ္ထုရှည်(၄) ဟာသနဲ့ သရော်စာ(၅) ရသစာတမ်း/ရသခံစားမှုဆောင်းပါး(၆) စာအုပ်အတွေးအရေး (Book Review) အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍခွဲတွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အဲဒီကဏ္ဍ ...